Kulamada Wareegga siddeed dhammaadka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019 ee caawa la ciyaari doono iyo Saacadaha la ciyaari doono. – Gool FM
Kulamada Wareegga siddeed dhammaadka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019 ee caawa la ciyaari doono iyo Saacadaha la ciyaari doono.
Dajiye July 11, 2019
(Qahira) 11 Luulyo 2019. Waxaa caawa la ciyaari doonaa kulamo ka tisran wareegga siddeed dhammaadka koobka Qarammada Qaaradda Afrika ee 2019, inagoo idiin soo gudbin doonna kulamada la ciyaari doono iyo saacadaha ay soo geli doonaan.
Kulanka ugu horreeya ee caawa wareega siddeed dhammaadka koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019 waxaa wada ciyaari doona xulalka Ivory Coast iyo Algeria, marka ay saacadda geeska Afrika tahay 7:00 fiidnimo caawa.
Madagascar iyo Tunisia ayaa dhankooda wada ciyaari doona kulanka xiga marka ay caawa saacadda geeska afrika tahay 10:00 habeennimo.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xulalka is-wajahaya caawa siddeed dhammaadka koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019 & Saacadaha ay baasmi doonaan, iyadoo xulkii adkaada uu u soo bixi doona afar dhammaadka tartanka:-
7:00 Fiidnimo Ivory Coast iyo Algeria.
10:00 Habeennimo Madagascar iyo Tunisia.
Juventus iyo De Ligt akhbaartoodii ugu dambeysay & waqtiga lasoo bandhigayo.